Wadamo ay Soomaaliya ku jirto oo loogu deeqay lacago badan – XAMAR POST
Wadamo ay Soomaaliya ku jirto oo loogu deeqay lacago badan
Bankiga Horumarinta Afrika (AfDB) waxa uu qorsheynayaa in uu lacago gaaraya $1bilyan (£759m) muddo toddobaad gudihiis ah ay ku taageri doonan qaar kamid ah wadamada Africa ee ku tiirsan wax soo saarka dalagoodi si qaaradda laga ilaaliyo cunto yari ka dhalan karta duulaanka Ruushka ee Ukraine.
Inta badan wadamada Afrika waxay ku tiirsan yihiin labada dal ee is haya waxyaabaha ay soo saran sida shidaalka iyo qamadiga.
Dalalka Soomaaliya, Benin, Masar iyo Suudaan ayaa kaalinta koowaad kaga jira liiska dalalka sida weyn ugu tiirsan Ruushka iyo Ukraine, iyadoo in ka badan 70% qamadigooda ay ka yimaadaan labadaann waddan.
Bangiga Horumarinta Afrika waxay u aragtaa kor u kaca qiimaha bariiska, galleyda iyo digirta inay uga sii dari karto cunto yarida ayna sare u qaaddo sicir bararka,” ayuu yiri madaxweynaha Bangiga Horumarinta Afrika Akinwumi Adesina.
Madaxweynaha Bankiga ayaa sheegay in uu qaban doono shir ay isugu imaanayaan wasiirrada maaliyadda iyo beeraha ee Afrika si qorshahaas loo dajiyo.
Sida laga soo xigtay Shirka Qaramada Midoobay ee Ganacsiga iyo Horumarinta ugu yaraan 25 waddan oo Afrikaan ah ayaa ka soo dhoofsada in ka badan saddex meelood meel dalagyada kabaxa Ruushka iyo Ukraine.
Madaxweyneyaasha Shiinaha iyo Mareykanka oo ka shiray dagaalka Ukrain
Ciidanka Dowladda Oo Fuliyay Howlgal Lagu Soo Saaray Miinooyin Lagu Aasay Wado